Fanadinam-panjakana : Vonona ny fiantsoana amin’ny CEPE, miomana ny kilonga – Free News
mercredi, 8 décembre 2021 - 12:59
Accueil/Fanadihadiana Manokana/Fanadinam-panjakana : Vonona ny fiantsoana amin’ny CEPE, miomana ny kilonga
Miandry andro sisa, dia hiatrika ny fanadinana CEPE ny ankizy madinika. Efa anatin’ny fiomanana faraparany na ireo mpianatra, na ny ray aman-dreny. Ny Cisco ihany koa efa miomana amin’ny fizarana ny taratasy fiantsoana ireo mpianatra hiatrika ny fanadinam-panjakana, indrindra ireo kilasy hanala CEPE.
Yves Samoelijaona 18 août 2020
Efa vonona amin’ny fizarana ny taratasy fiantsoana amin’ny fanadinana CEPE eto amin’ny Cisco Antananarivo renivohitra. Nilaza ny lehiven’ny Cisco Antananarivo, Ramananantony Lalaina fa efa vonona avokoa ireo taratasim-panadinana ireo fa miandry ny fotoana hizarana azy sisa. Miandry ny toromarika avy amin’ny minisiteran’ny fanabeazam-pirenana dia hirosoana izany fanaparitahana sy ny fiantsoana ireo ankizy madinika hiatrika ny fanadinam-panjakana voalohany ho azy ireo izay. Raha tsy misy ny fiovana, ny voalohan’ny volana septambra no hanatanterahana ny CEPE, ary ny Filoha Rajoelina mihitsy no nilaza izany tamin’ny fomba ofisialy ny 9 aogositra lasa teo.
Manoloana izany efa anatin’ny fiomanana ny ray aman-dreny amin’ny fiatrehan’ny zanany izany fanadinana izany.
«Efa vonona amin’ny rehetra, ary efa niomana foana amin’ny fanadinam-panjakana fa tsy hoe notapohana. Notohana ny ankizy tao anaty fihibohana na teo amin’ny lafiny fianarana lesona, na ny sakafo, na ara-tsaina koa aza manoloana ny fiparitahan’ny Covid-19.», hoy ny ray aman-drenin’ny mpianatra nizara ny fiomanany.
Ny mpianatra ihany koa andaniny, na teo aza ny fahatapahan’ny fampianarana, tsy maintsy mivonona hiatrika ny fanadinana. Ny ankamaroan’ny mpianatra hanala CEPE dia ray aman-dreniny no tena nanampy betsaka tamin’ny fampianarana sy ny famerenan-desona. Nandritra ity hamehana ara-pahasalamana sy ny fihibohana ity mantsy, tsy afaka nianatra ny mpianatra rehetra, ka ny sekoly no niezaka nandamina ny fahazoan’ny mpianatra ny lesona. Ho an’ny Andy izao, ny ray aman-dreniny no manazava sy mampanao ny fampiasana rehetra avy any am-pianarana. Ny tapak’andro maraina no tena mianatra sy manao fampiasana, ary ny hariva vao milalao.
«Mamerin-desona, mamerina fampiasana foana aho. Adinina ihany koa rehefa avy mianatra, ary tsaraina ato an-trano ny fampiasana, izay vao aterina any am-pianarana »,
hoy ny fitantaran’i Andy.
Andy, eo am-pianarana lesona sy famerenana ny fampiasana
Miezaka amin’ny famenoana ny lesona ny sekoly
Anisan’ny sahirana ny sekoly amin’ny fiatrehana ny hamehana ara-pahasalamana satria tsy afaka nianatra mihitsy araka ny didim-pankajana. Ireo sekolim-panjakana izay nijanona tsy nianatra efa hatramin’ny volana marsa. Ny ray aman-dreny no naka ny lesona sy ny fampiasana hianaran’ireo ankizy madinika. Misy ny fandikana lesona ao am-pianarana, ny fizarana « polycopie » ihany koa.
Tsy mifanalavitra amin’izany ny sekoly tsy miankina. Sady miankina amin’ny fanomezana lesona, ny « polycopie » sns ny fanomezana ny saram-pianarana ihany koa. Sekoly tsy miankina iray eny Ambodimanga Besarety (Tsy tonona anarana) no manao fandaminana isaky ny alatsinainy no maka lesona sy fampiasana, ary haverina ny zoma hotsaraina indray. misy ny laharana finday ahafahan’ny mpampianatra sy ny ray aman-dreny ary ny mpianatra mifandray. Toy izany isan-kerinandro no fandaminana, ary ny ray aman-dreny na ny solontenany ihany no maka izany, fa tsy ny mpianatra. Tsy ireo mpianatra hanala fanadinam-panjakana ihany no atao toy izany, fa ireo rehetra, hatramin’ny madinika indrindra aza. Ireto farany izay hiatrika fanadinana hifindrana kilasy ihany koa raha vao milamina ny toe-draharaha. Marihina fa anisan’ny sahirana ny sekoly tsy miankina amin’ny fiatrehana ny hamehana ara-pahasalamana. Efa natao ny fomba rehetra ahafahan’ny ray aman-drenin’ny mpianatra mandoa ny saram-pianarana mba ahafahana manome karama ny mpampianatra, saingy rehefa niitatra ny fihibohana, sahirana ny ray aman-dreny amin’ny fandovana saram-pianarana, sahirana ny sekoly amin’ny fandoavana karaman’ny mampianatra. Azo lazaina fa anaty fahasahiranana tanteraka ny sekoly, ny mpitantana, ny mpampianatra, saingy atao izay tsy ampisy fiantraikany izany any amin’ny mpianatra.
Nathan, ankizy madinika mianatra ao an-trano fa hiatrika fanadinana fifindrana kilasy.
Fanomanan’ny fanjakana : Efa tontosa ny fandrafetana ny lazana adina rehetra
Araka ny vaovao avy amin’ny minisiteran’ny fanabeazam-pirenena, efa tontosa amin’ny antsakany sy andavany ny fandrafetana ireo laza adina ho an’ny fanadinam-panjakana CEPE sy BEPC. Anatin’ny fanomanana ny fanapariahana izany eny anivon’ireo Cisco sy ivon-toeram-panadinana manerana ny Nosy sy ny fizarana ny taratasy fiantsoana ireo mpiadina, izay efa voafaritra ny datim-panadinana. Miandry ny toromarika rehetra amin’ny fizarana izany sisa ny tompon’andraikitra, ary mirotsaka an-tsehatra avy hatrany. Raha ny laza adina CEPE, izay akaiky indindra, ampy ny sekoly sy ny efitra hanaovana ny fanadinana amin’ny fampanarahana ny fepetra rehetra amin’ny hamehana ara-pahasalamana.
«Tsy misy atahorana ny fiatrehan’ny ankizy madinika ny fanadinana, efa am-pandaminana izany ny tompon’andraikitra rehetra, indrindra eo amin’ny lafiny fahasalamana », hoy ny fanazavana.
Efa am-panomanana ihany koa ny laza adina ho an’ny bakalorea ny minisitera. Efa nisy ny fiantsoana ireo mpampianatra mandrafitra izany, ary efa am-perin’asa amin’izao fotoana izao. Efa mihidy mihiboka ireo mpikarakara laza adina BEPC rehetra. Raha ny eto an-drenivohitra, efa hivoaka ihany koa datin’ny laza adina fanatanjahantena.
Voalaza fa hisy fisondrotany ihany koa ny teti-bola hoenti-manatanteraka ireo fanadinam-panjakana rehetra. Nanamafy hatrany ireo tomponandraikitra eo anivon’ny minisiteran’ny fanabeazam-pirenena fa tsy misy ny olana ho amin’ny fiatrehana izany.
Nanao ny TVM’Bosy ny TVM sy ny ministeran’ny Serasera sy ny Kolontsaina Nisy ny famokarana fandaharana ho an’ny mpanala fanadinana rehetra. Efa nanomboka ny herinandro teo ny fandaharana TVM’Bôsy vokarin’ny TVM. Tsy natao hanolo velively ny fampianarana rehetra sy izay tsy vita na hanolo ny tetikasa hafa hiandraiketan’ny mpisehatra amin’ny fampianarana fa tosika fanampiana avy amin’ny Televiziona nasionaly fotsiny ihany, anjara birikiny hitsinjovana ny mpanala fanadinana. Fandaharana vokarin’ny TVM amin’ny tetibolany madiodio, fa ny famokarana fandaharana hiarahany miasa amin’ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina ary nahazo ny fankatoavan’ny Minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena ary hifandrimbonan’ireo mpampianatry ny miankina sy ny tsy miankina ny famolavolana. Ny fandaharana : – CEPE: 8ora sy sasany maraina / famerenana : 4 ora hariva – BEPC : 11 ora sy sasany maraina / famerenana : 4 ora sy sasany hariva. – BACC A/C/D, hanomboka ny 24 aogositra: 4 ora hariva, famerenana : 10 ora sy sasany alina. Handeha amin’ny pejy Facebook “TVMBosy” ny fandaharana rehetra aorinan’ny handehanany amin’ny TVM.